Shirkadda NUWACO oo ceel-biyood ka hirgalisay Tuulada Jalam ee Gobolka Nugaal – Nuwaco
Shirkadda Biyaha NUWACO ayaa ku guulaysatay markii ugu horeysay inay ceel biyood ka hirgaliso Deegaanka u dhaxeeya Tuulo Jalam iyo Daaru-salaam ee Gobolka Nugaal, Waxaana si weyn ugu farxay guusha shirkaddu ka gaartay ceelka riiga ee halkaas laga qoday Dadka Deegaanka oo ku niyad sam baahida uu ka dabooli doono ceelka NUWACO deegaankaas ka qoday.
NUWACO ayaa si rasmiya ugu wareejisay ceel biyoodkan 09 November 2016 xariga laga jaray maamulka iyo bulshada deegaamka Jalam ee Gobolka Nugaal.
Maareeye ku xigeenka shirkada NUWACO Cabdi Ibraahim ayaa sheegay ceelkaan inay muddo bil iyo bar ah ay ku hirgalisay Shirkadda NUWACO , Wuxuuna sheegay in biyihiisu yihiin kuwo dur dur ah , Isagoona hoosta ka xariiqay inay NUWACO masuuliyadd xoog leh iska saartay sidii ku noqon lahaa ceelku mustaqbalka dhow iyo kan fogba mid daboola baahida bulshada iyo duunyada deegaankaas ku nool.
Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda Hay,adda PSAWEN Xirsi Xasan Nadiif ayaa u mahad celiyay hay’adda Islamic Relief oo ku deeqday mashruuca lagu dhisay ceelbiyoodkaan iyo kuwo kale oo badan oo sanadkaan laga qoday deegaano badan oo Oomane ahaa.
Xirsi ayaa ugu baaqay dadka deegaanka Jalam inay ilaalsadaan Ceelkaan loo hirgaliyay ayna ogaadaan inuu yahay hantidooda. Waxaana intaas kadib hadlay gudoomiyaha Jalam oo ka mahad celiyay hirgelinta Ceelkaan isagoo sheegay inuu kusoo beegmay waqti adag oo dadka iyo duunyadu ku jireen biyo la’aan xoogan, sidoo kalena uu deegaanku u baahnaa inuu helo Ilbiyood looga baxo biyo la’aantu abaartu sababtay.
Intaas kadib, hay’adda PSAWEN iyo shirkada biyaha NUWACO ayaa u dhaqaaqay tuulada Xaarxaar ee hoostagta degnada Burtinle ee gobolka Nugaal, halkaas oo sidoo kale laga dhagax dhigayay ceelbiyoodkii ugu horeeyay taariikhda markii ugu horeysay.
Waxaa masuuliyiinta halkaas kusoo dhoweeyay xildhibaan Axmed Jaamac Cabdulle oo kamid ah xidlhibaanada barlamaanka dowladda Puntland ee kasoo jeeda deegaanka Xaarxaar oo ay wehliyeen waxgaradka deegaanka kiyo mushariixin aqalka hoose u sharaxan, kuwaas martiqaad u sameeyay madaxda PSAWEN iyo NUWACO, waxaana kadib loo dhaqaaqay goobta ceelka laga dhagax dhigayay.
Xildhibaan Axmed Jaamac Cabdulle oo ka hadlay madasha dhagax dhiga Ceelka Xaarxaar ayaa si weyn ugu mahad celiyay madaxweynaha dowladda Puntland, hay’adda PSAWEN iyo Islamic Relief oo aqbalay codsigoodii ku aadanaa in deegaankaan Ceelbiyood laga hirgaliyo si bulshada ku dhaqan uga baxaan dhibaatadii ka haysatay xaga biyaha oo ahayd baahida ugu weyn ee deegaanka ka jirtay.
Xildhibaanku wuxuu sheegay deegaankaan oo 30 sano jira inuu waligiis ahaa deegaan oomane ah oo dadkiisu baahiweyn u qabeen inay biyo helaan, si ay uga bxaan abaarta marwalba kusoo noqonoqta, wuxuuna shirkada NUWACO kula dardaarmay inay masuuliyad iska saaraan sidii Ceelkaan unoqon lahaa mid bulshadu ku qanacdo.
Maareeye ku xigeenka NUWACO Cabdi Ibraahim ayaa u balanqaaday bulshada reer Xaarxaar inay waxba ka hagrandoonin oo ay sida ugu wanaagsan uguna dhaqsiyaha badan u hirgelindoonaan Ceelbiyoodkaan, wuxuuna intaas ku daray inay sirkadu aqoon buuxda iyo waayo aragnimo dheer uleedahay qodida Ceelasha, wuxuuna dadka deegaanka ugu baaqay inaysan marnaba ka welwelin habka loo qadayo Ceelkaan.
Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda Hay,adda PSAWEN Xirsi Xasan Nadiif ayaa goobta ka hadlay, wuxuuna ceelkaan inuu qeyb ka yahay inka badan 30 Ceelalah oo sanad kaliya hay’addu ka hirgelisay Puntland, taasoo qeyb ka ah balanqaadkii madaxweynaha Puntland ee ku saabsanaa horumarinta adeega biyaha.
Agaaime Xirsi wuxuu sheegay in mustaqbalka dhow laga bixidoono ku tiirsanaanta biyaha cirka laga sugo maadaama aan marwalba la isku halayn Karin biyaha cirka ka yimaada, loona baahan yahay in biyaha dhulka hoostiisa ku jira lalasoo baxo, wuxuuna balanqaaday inay deegaan kasta oo Puntland kuyaala usameyndoonaan Ceelbiyood.
Ugu dambayn, waxaa madasha ka hadlay oo soo dhoweeyay qaar kamid ah waxaradka degaanka iyo musharixiinta aqalka hoose, kuwaas oo balanqaaday inay taageeradooda ku bixindoonaan sidii Ceelkaan uguulaysan lahaa.
Abshir Xaaji Cabdalla